सरकारले मधेशी दललाई लोभ देखाएर सरकार समर्थन लिन्छ : नेता महेन्द्र - Janakpur Today
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सांसद महेन्द्र राय यादवले सरकार मधेशी दललाई लोभ देखाएर समर्थन लिँने गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले मधेसको मुद्दा संबोधन नगर्ने तर मधेसी दललाई सत्ताको लोभ देखाएर समर्थन लिने प्रवृत्ति देखिएको बताएका हुन् । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी र सामाजवादीसंग पनि त्यही प्रवृति देखाएको उनको भनाई छ ।
सरकार मधेशको माग र मुद्दाप्रति गम्भिर नरहेको भन्दै अव पनि त्यही प्रवृत्ति राख्ने हो भने राजपा नसरकारलाई नसमर्थन गर्ने, नसरकारमा सहभागि हुने उनले बताए । सरकारलाई समर्थन गरेको १ वर्षसम्म राजपाले उठाएको मागप्रति सरकारले चासो नलिएको भन्दै संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा १८ महिना बस्दा पनि मधेशको कुनै मागमा छलफल नगरेको र सरकार आश्वासन मात्रै बाँडेको उनले बताए ।
राजपा माग र मुद्दामा अधारित पार्टी रहेको जिकिर गर्दै कहिले सम्म सरकारको आश्वासनमा मात्रै बस्ने ? भन्दै उनले सभामुख मार्फत प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी माग र मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । सत्ताका लागि होइन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारलाई समर्थन दिन तयार छौं, सरकारले कति दिन हाम्रो समर्थन चाहन्छ ? तर हाम्रो मुद्दा, माग संबोधन हुनुपर्‍यो, माननीय रेशम चौधरी छुट्नुपर्‍यो । आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार खर्च दिनु प¥यो, झुटा मुद्दा लगाइएकाहरुको मुद्दा फिर्ता हुनु प¥यो । संविधान संशोधन हुनु प¥यो ।’
अधिकारको आन्दोलन गर्दा २५ जना भन्दा बढी जेलमा रहेको, हजारौं मानिस भागेको र हजारौं घाइते भएको भन्दै अझै मधेशको माग र मुद्दाप्रति सरकार कुनै चासो नलिएको उनले उल्लेख गरे । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मधेसी दलसंग खेल्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।
नागरिकताको विषयमा बोल्दै नागरिकता अभावमा मधेशको जनता धेरै समस्या झेलेको उनले बताए । नागरिकता विधेयक धेरै दिनदेखि आझेलमा रहेको भन्दै सभामुखलाई त्यो विषयमा पनि जवाफ दिन उनले आग्रह गरे ।